ကျောက်တံတား CoinFalls ပင်မ » ရေတံခွန် » Mobile Casino Online & CoinFalls Big Welcome Bonus
t & c ရဲ့သက်ဆိုင်ပါသည်
CoinFalls phone casino allows you the player to takeacasino bonus and use the extra spins to playavariety of slots casino games that are applicable for the specific promotion. Get involved with awesome casino slots today. All the winnings obtained from using this bonus, are subject to the wagering requirements as specified – t & c ရဲ့သက်ဆိုင်ပါသည်. Only after satisfying them players allowed to cash out the winnings.
ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်© 2020 COINFALLS.COM
Coinfalls.com သည် Gibraltar တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Nektan (Gibraltar) Limited မှဖြစ်သည်။ Nektan သည်လောင်းကစားကော်မရှင် (နံပါတ် 000-039107-R-319400-015) ကိုဂရိတ်ဗြိတိန်ရှိဖောက်သည်များအတွက်လိုင်စင်ချထားပေးပြီးဂibraltarအစိုးရမှလိုင်စင်ရပြီး Gibraltar လောင်းကစားကော်မရှင် (RGL no.054) သည်အခြားဖောက်သည်အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်များပံ့ပိုးမှု - 020 3700 0991 / coinfalls.support@nektan.com